Iikhithi zeWifi, iikhamera zeWifi, iikhamera zebhetri- Aopvision
"Ukuthengisa kuqala, umthengi kuqala", ukujolisa kwintengiso kunye neemfuno zabathengi njengeyona nto iphambili kulawulo. Sisebenze nzima rhoqo sidibanisa imveliso kwaye siphucula inkonzo yethu. Besisoloko sikunye nawe.
Sine-ISO2008 yeSatifikethi seMigangatho yoMgangatho kunye ne-ISO14001 yeSatifikethi soLawulo lwezeNdalo; Ngapha koko, iimveliso zethu zoluhlu zivunyiwe ngezatifikethi zeRoHS, ze-CE kunye neFCC
I-1-Panasonic kwangaphambili ye-NPM SMT Line, isantya esiphezulu, kunye ne-Yamaha SMT LINE 2-Cwangcisa ubushushu obuPhezulu be-3-Line Line ye-4-Iqela le-R & D yeqela lokuthimba umntu we-50 Qty Capacity yenyanga: 200K yeeKhamera, 30K-50K ye-DVR / NVR
Shenzhen Aopvision Tech Co., Ltd yasekwa ngo-2006, eneemfuno ezizodwa R & D, imveliso kunye neentengiso kushishino lokhuseleko. Sinikezela ngazo zonke iintlobo zeemveliso zeCCTV kubathengi behlabathi, kubandakanya ukuKhangela ubuso be-Smart / ubuso be-IDH. 265 NVR, i-Smart IP Camera, i-Smart 5 KWI-1 XVR, iikhamera zobungcali kunye nokusebenza okuphezulu kwe-HD, iiKhamera zeWiFi kunye neekhamera ze-WiFi NVR, 4G / Wifi Solar Camera . Njengomnye wabenzi abaphambili e-China, i-Aopvision inikezelwe ukubonelela ngetekhnoloji ephezulu, imveliso esemgangathweni kunye nenkonzo yobungcali.